Vaovao farany - World Book
Mahazo fanehoana tsara momba ny fahasembanana amin'ny tantara foronina ve isika? Marina fa ny indostrian'ny famoaham-boky dia toa nahatsikaritra ela fa ilaina ny manokatra varavarana ho an'ireo mpanoratra manana fahasembanana. Taorian'ny fampielezan-kevitra nahomby tamin'ny haino aman-jery sosialy, Amazon dia nampiditra fizarana "fiction for kilema" vao haingana. Ny Fikambanan'ny Mpanoratra… hamaky bebe kokoa
Mpanoratra tsy miankina iray dia afaka mamoaka ny asany tsy mampiasa mpamoaka, misy amin'izao fotoana izao ny sehatra midadasika natao ho an'ny mpanoratra mitady hamoaka ny bokiny an-tserasera tsy misy fahasarotana. Mamela anao hamoaka boky misy sary ho an’ny ankizy mihitsy aza izy ireo mba hahafahan’ireo zandriny indrindra manomboka amin’ny tontolon’ny famakiam-boky, boky ho an’ny ankizy... hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy570 manaraka →